Honor V20: ထောက်ခံချက်များရပြီးနောက်အွန်လိုင်းမှအဓိကအချက်များပေါက်ကြားလာသည် Androidsis ပါ
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏နောက်ထပ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Honor V20 ၏အဓိကအချက်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်
လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့ဂုဏ်ယူစရာစမတ်ဖုန်းအသစ်အွန်လိုင်းပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာ။ Huawei ၏အဓိကအွန်လိုင်းအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သော Honor မှစမတ်ဖုန်းတွင်အခြားသောထုတ်ကုန်များ ဦး တည်နေသည့်ယေဘုယျ ဦး တည်ချက်နှင့်ဆန့်ကျင်သောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဒီဇိုင်းရွေးချယ်မှုများစွာရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုသောဤတယ်လီဖုန်းသည်နာမည်ကျော်ကြားသူအဖြစ်ကျော်ကြားသည် V10 ဂုဏ်ပြုပါအဆိုပါ V20 ဂုဏ်ပြုပါ, ယခု 3C နှင့် CMIIT (တရုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ ၀ န်ကြီးဌာန) အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ မော်ဒယ်ကုဒ်များဖြစ်သော 'Huawei VCE-AL00' နှင့် 'Huawei VCE-TL00' အောက်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောဤအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ၂ ခုမှအစိမ်းရောင်အလင်းကိုရရှိခဲ့သည်။
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်မှာ Honor V3 ၏ 20C အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်သည် Honor View 20 ကို EEC ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင် 'PCT-L29' ပုံစံနံပါတ်အောက်တွင်တွေ့ပြီးနောက်ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ Honor စက်အသစ်ကိုယုံကြည်သည် Honor View 20 ကိုခရစ်စမတ်အဖြစ်သတ်မှတ်မည်.
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဤအချိန်အတွင်း Honor V10 ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်ကိုသတိရပါ။ ဒီတော့အစီရင်ခံစာများတိကျမှန်လျှင်, Honor V20 ကိုမကြာမီဖြန့်ချိမည်ရက်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်အပတ်အနည်းငယ်အတွင်း။ ပေါက်ကြားခဲ့သော Honor စမတ်ဖုန်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ အင်္ဂါရပ်များနှင့်အခြားအရေးကြီးသောကဏ္aspectsများကိုကြည့်ကြပါစို့။
1 Honor View 20: နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များယခုအချိန်အထိပေါက်ကြား ၀ င်သည်
Honor View 20: နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များယခုအချိန်အထိပေါက်ကြား ၀ င်သည်
ကောလာဟလများအရသိရသည်, Honor V20 သည် ပို၍ ရိုးရာနှင့်ရှေးရိုးစွဲချဉ်းကပ်မှုကိုယူသည် Honor ကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်စမတ်ဖုန်းတွေမှာရွေးချယ်လိုက်တာထက် မကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သည် ဂုဏ်ပြုမှော်2သူကရှေ့ကင်မရာအတွက်လျှောစက်ယန္တရားတစ်ခုရှိပြီး၎င်း၏အဆင့်မြင့်လေထုသစ်ကိုပေးစွမ်းသည်။ Samsung မှလွဲ၍ အခြားကုမ္ပဏီများက notch လိုအပ်ချက်ကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြင့် screen အိမ်ခြံမြေတိုးချဲ့ရန်ယန္တရားသည်အသုံးဝင်သည်။
သို့သော် Honor V20 အတွက် ကုမ္ပဏီသည်အခြေခံကျကျပြန်သွားကာရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းကိုစွဲကိုင်ထားသည်။ အဆင့်မြင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သည့် terminal သည်ကြိုတင်ကြေငြာထားခြင်းမရှိဘဲရှေ့ဘက်ကင်မရာတစ်လုံးတည်းတပ်ဆင်ရန်ထိပ်ဆုံးတွင်ရေကျသည့်အပေါက်တစ်ခုပါရှိသည်။ ဒီဇိုင်းရွေးချယ်မှုသည်အတော်လေးဆင်တူသည်မှာသေချာသည် ဂုဏ်ပြု 8X နှင့် 8X မက်စ်လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်များစွာကစတင်ခဲ့သောမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတစ်စုံ။ ထို့အပြင် Honor V20 တွင် IPS LCD မျက်နှာပြင်ပါရှိသည်။ Screen ရဲ့အရွယ်အစားအတိအကျကိုမသိရသေးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် Honor က FullHD + resolution ကိုမြင့်မားတဲ့ aspect ratio နဲ့ထိန်းထားလိမ့်မယ်လို့ငါတို့ထင်တယ်။
အသစ်ကလိုပဲ အိမ်ထောင်ဖက် 20 နှင့်အသိအကျွမ်း Huawei P20, Honor V20 တွင်ကင်မရာသုံးဆထည့်သွင်းထားသည်။ ၎င်းတွင်ရိုးရာလက်ဗွေစကင်နာလည်းရှိလိမ့်မည်ဓာတ်ပုံဓာတ်ပုံအာရုံခံကိရိယာများအနီးတွင်ရှိသည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတိအကျမသိရသေးသော်လည်းအခြားကိရိယာတစ်ခုက Honor View 20 တွင် Honor Magic2ကဲ့သို့သုံးဆကင်မရာတပ်ဆင်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ စမတ်ဖုန်းတွင် 16MP + 24MP + 16MP ကင်မရာတပ်ဆင်နိုင်သည်.
ကောလဟာလများနှင့်ပတ်သက်သောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအချက်မှာလျင်မြန်စွာအားသွင်းနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ Honor V20 ၏ဘက်ထရီသည် 22.5 W မြန်သောအားသွင်းအားသွင်းနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ ဘက်ထရီစွမ်းရည်ကိုမသိရှိရသေးသော်လည်း Honor Magic2နှင့်ဆင်တူမှုများစွာရှိသောကြောင့် Honor V20 တွင် ၃,၅၀၀ mAh ဘက်ထရီသို့မဟုတ်အလားတူစွမ်းရည်တစ်ခုရှိနိုင်သည်။
မီးမောင်းထိုးပြနိုင်သည့်နောက်အချက်တစ်ချက်မှာ device ကိုနောက်ဆုံးပေါ်ပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ် Huawei မှ HiSilicon Kirin 980 ပရိုဆက်ဆာ, NPU ကို dual ရှိခြင်း၏ဝါကြွားသော SoC ။ SoC ကိုဖြည့်ဆည်းရန် Honor စက်တွင်6GB (သို့) 8 GB RAM မှတ်ဉာဏ်နှင့်အတွင်းအချိုးအစားမြင့်မားသော internal memory ရှိနိုင်သည်။
ရင်းမြစ်အရ, ကုမ္ပဏီသည် Honor V20 ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်ရှိနေပြီးယခုလတွင်စတင်ဖြန့်ချိနိုင်သည်။ စံသတ်မှတ်ချက်အရ Honor သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်စတင်မိတ်ဆက်ပေးမည်ဖြစ်သော်လည်းမကြာမီအိန္ဒိယနှင့်အခြားဥရောပနိုင်ငံများသို့ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။
Honor V10 ကို ၂၆၉၉ ယွမ် (ယူရို ၃၄၀ ခန့်) ဖြင့်စတင်ရောင်းချခဲ့သည်။ စျေးနှုန်းသည် 2.699GB / 340GB အမျိုးအစားအတွက်တရားဝင်သည်။ 4GB / 64GB အမျိုးအစားကိုယွမ် ၂,၉၉၉ (ယူရို ၃၈၀) ခန့်ဖြင့်ရောင်းချသည်။ ထင်မြင်ချက်အရ V20 ကိုစျေးနည်းနည်းမြင့်စွာရောင်းချနိူင်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏နောက်ထပ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Honor V20 ၏အဓိကအချက်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်
ဤ Honor ကမ်းလှမ်းချက်များ၏အကျိုးကျေးဇူးကိုယူပြီးမိုဘိုင်းဖုန်းများကိုယူရို ၁ ဒေါ်လာဖြင့်သာရယူပါ